Onlọ Canon Christopher | Li Tim-Oi Foundation
Onlọ Nzukọ Canon Christopher
A mụrụ Christopher na Hong Kong ebe nna ya bụ Bishọp; Florence Li Tim-Oi nwere ike ịhụ Christopher dị ka nwata. Bishọp RO Hall họpụtara ya 'Onye Nchụaja nke Chineke' na China na 25 Jenụwarị 1944, nwanyị mbụ onye ụkọchukwu na ọgbakọ Anglịkan zuru ụwa ọnụ. Tim-Oi na Christopher zutere n'oge 'The Peace' na Westminster Abbey na Jenụwarị 1984 mgbe Abbey ahụ jupụtara n'ememe ncheta 40th nke ụkọchukwu ya.
Christopher bụ onye otu theka England General Synod maka afọ 19, ndị ụkọchukwu Birmingham, Manchester na Oxford hoputara. O sokwa na Kọmitii Ọnọdụ Synod ruo afọ iri, na-eji ohere ọ bụla iji bulie ọkwa nke ụmụ nwanyị. N’arụmụka na Julaị 1975, mgbe nzukọ ndị isi ọgbakọ ahụ nabatara njikọ nke ụmụ nwanyị, ọ rụrụ ụka na ọ kaara uru ịga n'ihu, dịka nna ya siri gosipụta na-ahọpụta Tim-Oi n’ihu Chineke. Afọ iri na iteghete gasiri na Banbury, Christopher kwusara ozi na emume nke ụmụ nwanyị iri na otu mbụ ndị ụkọchụ aja na Oxford.
Bishọp Hall Legacy Fund kwụrụ ụgwọ maka nwanne nwanyị Florence Li Tim-Oi, Rita Lee-Chui, ka ya na Tim-Oi gaa China na 1987 ebe Dr Robert Browne mere fim ya, 'Laghachi na Hepu', banyere ndụ na ozi Tim-Oi. . Tim-Oi na Rita nọ na England otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị maka mmalite nke ihe nkiri nke Browne, kpuchiri ndị bishọp Anglịkan na Lambeth Conference na Canterbury na August 1988. Afọ 40 tupu mgbe ahụ, ka ọ na-aga nzukọ Lambeth, nna Christopher nwere ajọ echiche nnabata site n’aka nwanne ya bishọp.
Mgbe Florence Li Tim-Oi nwụrụ na Toronto na 1992, Rita na-akpọtụrụ Christopher, na-achọ ọ bụghị naanị ka nwanne ya nwanyị ga-enweta nsọpụrụ, kama ka e mee ka ozi ya gbasaa n’ọdịdị nke ndị nwanyị Ndị Kraịst ndị ọzọ, ụmụ nwanyị ndị nwere mmasị A ga-enyerịrị Tim-Oi ọzụzụ iji wee rụọ ọrụ ha. Rita nyere Li Tim-Oi Foundation onyinye mbụ, na agbanyeghị na ọ nwụrụ na 2016 mgbe ọ dị afọ 101, mmesapụ aka ya na-aga n'ihu na-emetụta ndụ ụmụ nwanyị Anglịkan.
Christopher rụrụ ọrụ dị ka odeakwụkwọ Secretary nke Li Tim-Oi Foundation ruo afọ 24, dabere na ụlọ o ketara n'aka Madeleine na Geoffrey Allen, onye kụziiri Agba Ọhụrụ na Florence Li Tim-Oi na seminarị na Canton na 1930s.
Na nleta nleta na Hong Kong na 1955, Christopher zutere otu nwanyị onye China a na-akwụ ụgwọ 1p maka uwe linen ọ bụla Irish kpara. Ikpe ziri ezi maka ụwa 'kwesịrị' ịbụ isi ihe lekwasịrị anya afọ 58 Christopher na ọrụ echichi.